हाम्रा देशका नेताहरुको सतबुद्धि पलाओस् - NepaliEkta
हाम्रा देशका नेताहरुको सतबुद्धि पलाओस्
3 July 20203July 2020 Nepaliekta	0 Comments
आजको आन्दोलन को सँग ? निरंकुशता हटिसकेको छ । ति हटाउनेहरू सत्तामा छन् । आजका सत्ताधारीसँग आन्दोलन किन गर्नपर्यो ? आन्दोलनको औचित्य के ? म राष्ट्रवादी, तँ भारतवादी वा चाईनावादी यस्तो किन ? राष्ट्रियताको सवालमा एकढिक्का हुने बेला हो यो । साम्राज्यवादी बिस्तारवादीहरूले संधै फुटाउ र राज गरको नीति अन्तर्गत अस्थिरता पैदा गराईरहे अब कसरी के होला ? यिनै बिषयमा आजको चर्चा केन्द्रित गरिनेछ ।
आदरणीय जनसमुदायहरू ,
यसो भनिंरहँदा म नेता चाहि होइन है । त्यसकारणले सबै जिज्ञासाको चर्चा मबाट सम्भव नहोला । यदि देशको लागि चिन्तित् हुनुहुन्छ भने तपाईहरू अनलाईन मै हुनुहुन्छ भने निश्चय पनि तपाईको नजर यहाँ ठोक्कीने छ । दिमागमा खलबली मच्चिने छ, हातका औंलाहरू राजनैतिक चुनिन्दा शब्दहरू खोज्दै सल्बलाउने छन् । सवाल जवाफ टिका टिप्पणीले हंगामा हुने छ । किनकी तपाइहरू झुठा नौटंकी मायाजालमा रमाउने यौनवादी सोंचाई भन्दा धेरै माथि देश र जनताको हितमा पार्टी र क्रान्तिको लागि वैचारिक रूपमा जुरूक्क उठिसक्नु भएको छ ।
त्यही भएर मैले आशा मात्र होइन, विश्वास पनि लिएको छु । आन्दोलनको बारेमा हामीले भनेका छौं, राजा फाल्नु मात्र आन्दोलनको अर्थ थिएन, राजा फालेर जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण हुन सकेन भने राजाको ठाउँ ओगटेका नयाँ राजाहरूको विरूद्ध झन ठूलो आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउनको लागि हामी तयार हुनुपर्ने छ । हो त्यो दिन आज आएको छ । हिंजो राजतन्त्र फाल्नको लागि आन्दोलन गर्नेहरू सत्तामा पुगे तर जनतालाई संवैधानिक हक अधिकार दिने सवालमा फेरी निरंकुशता लाददैछन् । कुर्चीकै लागि राजनैतिक मुद्दालाई किनारा गरेका छन् । पार्टी विधान र सामान्य प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई समेत रद्दीको टोकरीमा मिल्काएका छन् । यद्धपि आलोपालो भद्र सहमती गोला प्रथामा काम चलाउने यि कथित कम्युनिष्टहरूलाई नीति सिदान्तको कुरा भैंसीको अगाडि बिन बजाएको जस्तै हो ।
यि कुर्चिका भोका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी बोकेका अवसरवादीहरूलाई जनताको चाहना र देशको आवश्यकता के हो ? बुझ्ने फुर्सद नै हुँदैन । तैपनि यतिबेला कोरोना विश्व महामारीको हाहाकार छ, चीन–भारतको छद्यम युद्ध पराकाष्टामा छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने बेला यही हो ।
कमसेकम यतिबेला सरकार बदल्ने, आपसमा झगडिएर तमासा देखाउने बेला होइन । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने नहटाउने यो सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक मामिला हो । यसको मतलब देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्ने गरेर बेला न कुबेला राती सपना बिग्रिएको भरमा राजिनाना माग्नु गलत मात्र होइन मुर्खता पनि हो । बेलैमा सतबुद्धि पलाओस ।
← प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामासम्बन्धी विवाद
राष्ट्रवादी बन्नु पनि कसरी बन्नु ? →
10 June 2021 13 June 2021 Nepaliekta 0
आफ्नो पार्टीको विवादलाई लिएर संसद विघटन गर्नु लोकतन्त्र माथिको कुठाराघात : खड्का
कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक : नेकपा (मसाल)
30 May 2021 13 June 2021 Nepaliekta 0